Hawaiian Airlines waxay u guureysaa Terminal -ka Caalamiga ah ee Tom Bradley ee LAX
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Hawaiian Airlines waxay u guureysaa Terminal -ka Caalamiga ah ee Tom Bradley ee LAX
Martida u socota Hawaii ee ka socota LAX waa inay meel iska dhigaan qiyaastii 15 daqiiqo si ay uga sii gudbaan miiska dabaqa saddexaad ee laga galo gudaha Terminalka Caalamiga ah ee Tom Bradley una gudbaan Galbeedka Gates iyada oo loo marayo marin dhulka hoostiisa ah.
Oktoobar 12 -keedii, Shirkadda Diyaaradaha ee Hawaii waxay ka guureysaa Terminal 5 waxayna bilaabaysaa inay ku soo dhaweyso dadka safarka ah Terminal B ee Madaarka Caalamiga ah ee Los Angeles.
Martida Hawaiian Airlines ee u safreysa kana soo jeeda Hawai'i iyagoo sii maraya LAX waxay ku raaxaysan doonaan xarun casri ah oo raaxo leh.
Hawaiian waxay bixisaa lix dagaal oo maalinle ah oo u dhexeeya LAX iyo Jasiiradaha Hawaii, oo ay ku jiraan adeegyo saddex-maalinle ah Honolulu, iyo adeeg maalinle ah Kahului oo ku yaal Maui, Kona on Island of Hawaii, iyo Lihue on Kauai.
Hawaiian Airlines waxay guri cusub ku yeelan doontaa Madaarka Caalamiga ah ee Los Angeles (LAX) laga bilaabo Talaadada, Oktoobar 12, marka ay ka guurto Terminal 5 waxayna bilaabi doontaa inay soo dhoweyso dadka safarka ah Terminal B, oo sidoo kale loo yaqaan Terminalka Caalamiga ah ee Tom Bradley.
Martida reer Hawaii ee u safraya kana soo jeeda Hawai'i ee sii maraya LAX waxay ku raaxaysan doonaan dhisme casri ah oo raaxo leh oo leh adeegyo badan, ballaarinta cuntada iyo ikhtiyaarka wax iibsiga iyo aag albaab ah oo ballaadhan.
Hawaiian Airlines wuxuu bixiyaa lix dagaal oo maalinle ah LAX iyo Jasiiradaha Hawaii, oo ay ku jiraan adeegga saddex jeer-maalinlaha ah ee Honolulu, iyo adeegga maalinlaha ah ee Kahului ee Maui, Kona ee Jasiiradda Hawaii, iyo Lihue ee Kauai.
Jeff Helfrick, oo ah madaxweyne ku xigeenka hawlaha garoonka diyaaradaha Hawaiian Airlines.
"Markay Hawai Airlines u guurto gurigeeda cusub ee West Gates ee Terminal -ka Caalamiga ah ee Tom Bradley, rakaabku waxay ku raaxaysan doonaan mid ka mid ah dhismayaasha gegida dayuuradaha ee ugu casrisan uguna farsamaysan adduunka," ayuu yiri Justin Erbacci, Maamulaha Madaarrada Adduunka ee Los Angeles. “LAX waxay noqotay Hawaiian Airlines oo ah meeshii ugu horraysay ee dhul -weynaha Mareykanka tagto in ka badan 35 sano ka hor, waxaanan rajaynaynaa inaan sii wadno xiriirkeenna dheer ee ku xiraya Hawaii Koonfurta California. ”
Martida u ambabaxaysa Hawaii laga bilaabo LAX waa inay meel dhigtaa ku dhawaad ​​15 daqiiqo si ay uga sii gudubto miiska dabaqa saddexaad ee laga soo galo gudaha Terminal-ka Caalamiga ah ee Tom Bradley kuna sii jeedda Galbeedka Gates iyada oo loo marayo marin dhulka hoostiisa ah. Martida Hawaiian ee ka timaadda LAX oo ka timaadda Hawaii waxay ka qaadan doonaan bacaha la hubiyay sheegashada dabaqa koowaad. Socotadu waxay kaloo isku xiri karaan inta u dhaxaysa Galbeedka Gates iyo Terminals-ka 4-8 iyagoo maraya marinka madhalays ah iyada oo aan loo baahnayn in la nadiifiyo amniga dheeraadka ah.